Kocamaz: "Mersin Metro Project dị n'okpuru Nrụrụ Aka" | RayHaber
Homeụgbọ okporo ígwèKocamaz: Aş Mersin Metro Project bụ na Mmecha Koc
Kocamaz: Aş Mersin Metro Project bụ na Mmecha Koc
05 / 09 / 2018 ụgbọ okporo ígwè, General, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Metro, Turkey
Mersin Metropolitan Mayor Burhanettin Kocamaz, Mersin Industrialists na Business People Association (MESIAD) gara nzukọ ozi ahụ.
Nzukọ MESIAD Erhan Deniz ya na ndị ọchụnta ego nọ na nzuko ozi Kocamaz, mere ngosipụta banyere ọrụ nke Obodo Obodo. Mersin azụmahịa ụwa na-atụ n'anya banyere ndị azụmahịa Kocamaz zara ya na nzukọ a gbanwere echiche.
Engin Mersin bụ anyị niile. Anyị, dịka MESIAD, na-elekọta Mersin na ọrụ ya. Obodo Mersin Metropolitan nyere anyị nnukwu enyemaka. Taa, anyị ga-ajụ onye isi ala anyị ebe a gbasara ndị na-achọ ihe banyere Mersin, nke bụ isi obodo. "
“MESİAD na-edu ọtụtụ ọrụ”
N'ikwu na MESİAD bụ ụlọ ọrụ dị mkpa maka Mersin nakwa na ọ bụ ndị mebere oke akụ na ụba Mersin, Kocamaz kwuru, tanesi bụ otu n'ime ụlọ ọrụ na-akpụzi akụnụba Mersin. Karịsịa ebe ọ bụ na ọ bụ otu nọọrọ onwe ha, nke na-abụghị nke gọọmentị, ọ dị mkpa maka Mersin ịbụ nzukọ na-ebufere nsogbu nke obodo na ndị nwere mmasị na-enweghị mgbanye na mgbagide kemgbe oge gara aga, ma na-ebute ọtụtụ ọrụ. Taa, ọ dịkwa mkpa ka anyị nọrọ ọnụ na nnọkọ gbasara nsogbu na ọdịnihu Mersin
Edik Anyị enweghị ike iru ebe anyị chọrọ maka ihe ngwọta nke nsogbu ndị ahụ ”
N'ikwu na Mersin bụ obodo pụrụ iche nakwa na ha erutebeghị ebe ha chọrọ idozi nsogbu Mersin, Kocamaz kwuru na ha na-achọ ụzọ isi dozie nsogbu ndị ahụ na-enweghị ịkpa oke na mpaghara ime obodo na etiti. Kocamaz kwuru na ha na-abịakọ ọnụ na ndị otu na-abụghị gọọmentị na ndị muhtars maka atụmatụ zoning nke ga-edozi nsogbu Mersin n'ụzọ dị ukwuu wee kwuo, ama ama atap puku atụmatụ 13 / 1 gaa ozi ahụ ngwa ngwa tupu atụmatụ puku 5 / 1. Mana atumatu a abughi atụmatụ iji mee ka uzo Mersin ghara iru. Ozugbo anyị banyere n'ọchịchị, anyị lebara nsogbu ndị a anya. Anyị na-eme ka 100 / 1 puku kwuru atụmatụ dị iche iche. N'ihi ogologo usoro, atụmatụ a gafere nzuko omeiwu ma nyefee nnabata nke ozi ahụ. Ozi ọma kwenyekwara mgbe obere mgbanwe gasịrị. Mgbe nke ahụ gasịrị, anyị malitere ịrụ ọrụ na atụmatụ 100 / 1 puku. Na mgbakwunye, anyị malitere ọrụ nke ationgbọ njem Master Plan. Na mbu ebuputala atụmatụ a ma dechaa ya n'ime ọnwa 5. Mgbe anyị mechara ọrụ, anyị tụlere atụmatụ a ma rụzigharị ya. N'ihi mkparita ụka dị ogologo, atumatu a zuru oke ma mee mkpebi maka iwu ụgbọ okporo ígwè dị mfe ..
“A ga-arụzu ọrụ ụgbọ ahụ”
Kocamaz, onye keriri nkọwapụta oru ngo nke Mersin metro nke bụ otu n’ime ihe dị mkpa na nnukwu ọrụ ọ ga-ewetara Mersin, kwuru, Hav Havaray gafere n’obi anyị mana e kweghị ya. Mkpebi ahụ kpebiziri na ọ ga-akacha mma ịbanye na nzuzo na mpaghara ụfọdụ. Emeghachiri atụmatụ ahụ. Ihe oru a bu ka emechaa. A na-eme oru a ugbu a n'ụzọ ụzọ ụgbọ oloko dum. Ha niile mere atụmatụ ịbanye n'okpuru ala. Anyị nwere nsogbu na ọdụ ụgbọ mmiri. A na-eji ike ya eme ihe karịa 100 pasent. Na mgbakwunye, ka anyị na-enweghị ike ime nyocha ihe ọkụkụ nuklia ọkụ na Mersin, nsogbu ịkọ azụ
Mayor Kocamaz kwuru na Mersin bụ ebe ọrụ ugbo, akụkọ ihe mere eme, ọdịbendị na ụlọ ọrụ, na ụbọchị ọ bụla na-agafe, ha na-eche nsogbu ụfọdụ wee sị, Wez anyị nwere nsogbu banyere ọdụ ụgbọ mmiri. A na-eji ike ya eme ihe karịa 100 pasent. Na mgbakwunye, okwu banyere ọkụkụ nuklia na Mersin, ebe anyị enweghị ike ịgbari ala, nsogbu nke ọrụ azụ azụ. N'aha ndị Mersin, anyị kwesịrị ichebe ọdịmma nke Mersin. Mgbe ụfọdụ ụfọdụ anaghị amasị ihe anyị kwuru, mana anyị ga-agbachitere ma chebe obodo a na ọdịnihu ya. Anyị ji ike anyị na-arụ ọrụ n'ime ya. Anyị na-alụ ọgụ, mana ruo oge ụfọdụ. Site na iwu ọhụrụ ndị a, arụmọrụ nke obere obodo belata ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ efu. Ndi n’isi n’ozi nile nwere ike ime mkpebi n’obodo n’ajughi gi. N'ezie ike ọrụ. Anyị na-amali ihe mgbochi ndị na-esite na iwu dị ka a ga-asị na anyị na-arụ ọrụ ka à ga-asị na anyị na-agba ọsọ, kul kwuru.
2 na-achọsi ike site na ndị na-azụ ahịa na ndị ọkacha mmasị na-atụ anya ya. Onye isi obodo Kocamaz zara ajụjụ banyere njikọ dị n’agbata Ring Road na ngalaba mpaghara a haziri ahazi wee sị, de Mgbe m bụ onye isi obodo Tarsus, anyị kwuru na a ga-emeghe ụzọ maka ikpughere mpaghara ndị a. Anyị abụọ ga-ezu ike n'okporo ụzọ D-400 ma nye njikọ OSB. A tụlere nke a n'oge ahụ. Nke a bụ oge mbụ anyị tinyela nke a n'ime atụmatụ puku 1 / 100 ma anyị arịọla Onye Oche ka o nyere anyị aka. Ha gwara anyị, Siz ị ga-arụzu nzipu anyị ma anyị ga-eme otu a. N’ezie anyi enweghi ike ibughari uzo a dika obodo. Agbanyeghị, anyị ga-eme nke a na ngwa 18. Mana iji nwee ike ịme 18 n'akụkụ abụọ nke ụzọ ahụ, anyị kwesịrị inye ndị mmadụ mpaghara ụfọdụ mpaghara ka anyị wee jiri ngwa ahụ were ebe ndị ahụ. Anyị tinye nke a na usoro mkpuchi ihe, mana iji mejupụta atụmatụ izipu ihe, anyị kwesịrị ịnweta echiche site na ụlọ ọrụ ndị dị nso na 90. Ihe kachasị dị na ha bụ DSI na Ministry of Agriculture. Abụọ ndị a bụ nnukwu ihe mgbochi. Anyị anabataala ụfọdụ usoro n'agbanyeghị ihe niile. N'ihi na ọ bụ mbubreyo. Anyị kwuru na 1 / 5 puku kwuru ka anyị mee usoro site na ọkwa. Mpaghara Akwụghị ụgwọ Ka anyị bulie mpaghara ruo n'okporo ụzọ awara awara awara na mpaghara mbụ. Akụkụ ọwụwa anyanwụ dịka mpaghara nke abụọ, anyị kwuru ka anyị hapụ. Ugbu a, akụkụ ọdịda anyanwụ nke mpaghara ọrụ ugbo ka amatala. N'ebe ọdịda anyanwụ, azụmaahịa abịala n'otu ebe. Mana echiche ndị ọrụ ozi mpaghara n'akụkụ ọwụwa anyanwụ apụtabeghị. Anyị na-aga n'ihu na-ekwu maka ya. ”
Maazị Kocamaz, onye zara ajụjụ ndị ahụ jụrụ banyere ọnọdụ ọhụụ nke Denizpark ma gee ntị na ntinye aka maka ụlọ ọrụ a ga-ewuru kama Denizpark, kwuru, “Mkpebi ụlọikpe bibiri Denizpark. N’ihi ya, anyị siri ọnwụ ka anyị ghara ịda. Anyi ekwuputala ugboro ugboro ka edee otu Ochichi nke steeti na ozi kwesiri ekwesi. A manyere ya ịda mba. Anyị nwere ọrụ a kwadebere maka ebe ahụ. Anyị achọtaghị ndị ga-enwe ọ .ụ. Ahụ erughị m ala ugbu a. Anyị kwuru na ọ dịkarịa ala, ka anyị rụọ ọrụ ebe ndị mmadụ nwere ike ịbanye ma pụọ. Anyị rịọkwara ka e wuo ọdụ ụgbọ mmiri ebe ahụ. O nwetara nkwado site n'ozi. Izu gara aga ha nwere nzukọ iwebata ọrụ ngo. Emere nzukọ na EIA. N'aka ozo, emepere ya ”.
Kocamaz: "Ihe mgbaru ọsọ dị na usoro ụgbọ oloko bụ njedebe nke afọ a Yapım
Kocamaz, Mersin City Hospital Nsogbu ationgbọ njem
President Kocamaz Na-egosi Opupu nke Sefa Bridge
Mersin Ụgbọ njem Master Atụmatụ
ISIAD, Ihe Mgbaru Ọsọ Nye Ndụ Mersin